Tuesday, 04.07.2020, 03:56pm (GMT+5.5) Home Contact
नेपालको परिप्रेक्ष र संघीय शासन
Tuesday, 12.12.2017, 02:47pm
नैबेला ‘कांग्रेस नै गिरिजा र गिरिजा नै कांग्रेस’ भनेर पार्टीको आधिकारिक निर्णय समेत नचाहिने हुकुमी शैली चलाएर अधिकांश कांग्रेसीले गिरिजाको भजन गाएर आआफ्नो बन्दोबस्त पनि गरे । त्यो शैलीबाट पार्टीको आदर्श र लक्ष्य धरापमा प¥यो । कतिपय दोस्रो तहका नेताले त्यस प्रवृत्तिको बिरोध पनि गरेकै हुन्, तर तिनीहरुलाई उल्टै कार्वाहीका नाममा दुःख पनि दिइयो ।
प्राच्यका विश्वविद्यालय, शासनको भाषा र वर्तमान
विश्वविद्यालयको शाब्दिक अर्थ हो– संसारका विद्या घर । लक्षणिक अर्थ फरक छ । विद्याको परिभाषाभित्र असंख्य विधा छन् । अनेक नियम, विधि, विधान र बोधगम्य अव्यक्त सत्व, तत्व, महत्व घनिभूतरुपले यत्रतत्र विद्यमान छ । ‘आलय’को सामान्य अर्थ घर हो । यस्ता सबै विद्याको घरलाई विश्वविद्यालयको नाम दिइयो । शास्त्रसम्मत ढंगले व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भए पनि अहिले मन्त्रालयका साथै विश्वविद्यालय व्यापार गर्ने कम्पनीमा परिणत भए ।
Tuesday, 12.05.2017, 03:47pm
देशमा प्रजातन्त्र आएको सात दशक पुग्न लाग्यो । एक दशकयता गणतन्त्र छ र दुई वर्षयता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । संविधानसभाले संविधानन जारी गरेको दुई वर्ष बितिसकेको छ र यस अवधिमा तीन चरणका निर्वाचन सम्पन्न भएर पर्सी मंसिर २१ गते चौथो चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनन हुँदैछ । यो निर्वाचनपछि नयाँ संविधानले कार्यान्वयनकोा बाटो समात्नेछ ।
सन्दर्भ निर्वाचन : करोडौं खर्चेर चुनाव जित्नेले देशका लागि के गर्लान् ?
आसन्न दोस्रो चरणको चुनावको पूर्व सन्ध्यामा भएका बिस्फोटले म्यादी प्रहरीको ज्यानै लियो । दोस्रो चरणको चुनावपूर्व भएका आचारसंहिताको उल्लंघनको क्रममा गृहमन्त्रालयले सदावर्त जस्तै दशौं करोड आर्थिक सहायता कार्यकर्तालाई बाँड्यो । तुफानी प्रचार शैलीमा शीर्ष नेताहरुले गरेका भाषण दलीय राजनीतिक हल्लाखोर प्रचारात्मका दृष्टिले यथास्थान, यथामति रहे । वैचारिक दृष्टिले कमजोर र नीतिगत दृष्टिले अस्पष्ट रहे ।
जित्ने त धेरै होलान् ? तर देश नराम्ररी हार्दैछ ।
Tuesday, 12.05.2017, 03:46pm
यस पटकको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई निकै नजिकमा पुगेर हेर्ने र बुझ्ने मौका मिल्यो । यद्यपि यस पहिलेका खास गरी बालिग मताधिकार प्रयोग गरी आम मतदाताले तत्कालिन दलविहीन पञ्चायती शासन प्रणाली अन्तर्गतको विधायिका (राष्ट्रिय पञ्चायतका) लागि प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने बेलादेखि नै आफूले कुनै न कुनै रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने नगरेको होइन, थिएन ।
Tuesday, 11.28.2017, 11:19am
नेपालको मौसमी वातावरण चिसिदै गए पनि राजनीतिक वातावण भने तात्तिदै गएको महसुस गरिरहेछन् अहिले नेपालीहरुले । यद्यपि आम निर्वाचनको उहिले (निर्दलीय कालमा) त्यति अनुभव गर्न नपाए पनि २०४८ साल यता भने समय असमयमै किन नहोस्, निर्वाचन पटकपटक हुने गरेको छ । त्यसका लागि मतदाताहरुलाई आफ्नो पार्टीलाई मतदान गर्न संभव असम्भव जे पनि पूरा गर्ने वाचा कवोलको लामो फेहरिस्त सहितको घोषणा जारी गर्ने होड मच्चिएको मच्चियै छ ।
जतिसुकै ठूलो र अभूतपूर्व परिवर्तन भयो भनिए पनि देश आज अनेकथरि समस्याबाट ग्रस्त छ । यी समस्याको समाधानन गर्ने भन्दै राजनीतिक आन्दोलन भयो, जनताले जानेर, नजानेर साथ दिए । व्यवस्थाा बदलियो, पात्र बदलिए तर प्रवृत्ति बदलिएन । देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या गरीबी र रोजगारीको अभाव हो । गरीबीको कारण चाहिं अशिक्षा हो ।
Friday, 11.24.2017, 12:55pm
उटा कुनै राष्ट्रिय विषयमा छलफल गर्न काठमाडौं जिल्लाका वर्तमान र भू.पू.रा.प.हरु सबैलाई बैठकमा बोलाइएको थियो । बैठक शुरु भइसकेको थिएन । सभापति प्रयोगराज, कीर्तिबाबु र केदारमान “व्यथित” लगायतका धेरै व्यक्ति आइ सक्नुभएको थियो । कसैले देशमा “भ्रष्टाचार” हुने गरेको कुरा निकाले । कीर्तिबाबुले “अब के गर्दा हुन्छ र देश बन्छ त ! भनेर सोध्नुभयो ।
Wednesday, 11.15.2017, 02:01pm
परिस्थितिलाई आफ्नो दृष्टिबाट मात्र होइन, जनताका दृष्टिबाट पनि हेर्नुपर्दछ । राजनीति गर्नेले आवेशमा होइन पछि आउनसक्ने समस्या–बाधा व्यवधान पनि ख्याल राख्नुपर्छ । के गर्दैछौं, कहाँ पुग्न खोज्दैछौं र त्यसको असर कहाँ के पर्छ इत्यादि बेलैमा सोचेर मात्र पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
Wednesday, 11.15.2017, 02:00pm
एक पद एक व्यक्तिलाई टिकट दिने भएपछि निर्वाचन हुने कुरै थिएन । सबै “तह (काठमाडौं नगर पञ्चायत र गाउँ पञ्चायत) मा कसकसलाई टिकट दिनु उपयुक्त हुन्छ” भन्नेमा संयोगले पी.डी.ओ.ले नै अनौपचारिक राय दिनुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो । सबै मापदण्ड वस्तुनिष्ठ थिएनन् । त्यसैले मैले आफ्नो ब्रह्मलाई साक्षी राखेर इमान्दारीपूर्वक गाउँ फर्कका मापदण्ड पूरा गर्ने नगर्नेको नाम एक एक गरी दिनु पर्ने भयो ।
नेतृत्वको संकट, राजाको प्रश्न– जनताको उत्तर
Tuesday, 11.07.2017, 11:02am
नेपाल अहिले नेतृत्व संकटको विकराल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । जताततै अराजकता छ । संवैधानिक सबै संस्था र न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका समेत संक्रमणकालको भूमरीमा फनफनी घुम्दैछन् । बहुदलीय प्रजातन्त्रका सौन्दर्य र भूषण मानिने आधारस्तम्भ राजनीतिक दल नै नीतिप्रधान नभएर अस्थिर नेताको सन्काहटमा संचालित भएकाले ‘तल्लाघरे नरे पल्लाघर सरे’ लोकोक्ति चरितार्थ गर्दै यो पार्टी र त्यो पार्टी चाहार्दै भौतारिंदै गुमराह पथिक जस्तै सिद्धान्तविहीन बनेका छन् ।
Tuesday, 11.07.2017, 11:01am
सरकार निर्बल जनताको सहारा हुनुपर्नेमा सबलले नै फाइदा उठाइरहेको देखिन्छ । राज्यले नै निर्वलको उपेक्षा गर्छ र बलियाले मात्रै फाइदा पाउँछन् भने त्यस्तो राज्यव्यवस्थाले असमानता र विभेद हटाउला भनेर विश्वास गर्न सकिंदैन । मूलकुरा भनाई र गराईमा तालमेल भएको व्यवहारबाटै देखिनुपर्छ, भाषणले मात्रै हुँदैन ।
Tuesday, 11.07.2017, 11:00am
आसन्न महानिर्वाचनका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन असफल राजदूत मञ्जिव पुरी धनुषा पुगेको समाचार सार्वजनिक भयो । नेपाल एउटा एशियाको मात्रै नभई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका दुई उदीयमान शक्तिशाली राष्ट्र बीचको सानो विकासोन्मुख, गरीब र विपन्न वर्गको बाहुल्यता भएको, तर दुवै छिमेकी जस्तै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो ।
Wednesday, 10.11.2017, 01:50pm
संघ भनेको जोडिनु हो । त्यसैले यहाँ संघराज्य हुनुपर्छ भन्दा नेताले के बुझेर बोले, त्यो उनैलाई थाहा छैन । संघ राज्य भनेको फुटाउने, टुटाउने काम भएको छ । अझै पूर्णता आइसकेको छैन । भनेको के हो र हामी के भन्दैछौं भन्ने राम्रो बुझेर मात्रै बोल्नु र गर्नु राम्रो हो ।
अहिले खास गरी स्थानीय तहका तीन वटै चरणको निर्वाचनको काम सम्पन्न भएपछि र संघ (संसद) र प्रदेशको गठन गर्ने (पहिलो) निर्वाचनको पूर्वसन्ध्याकालमा– ने.क.पा. (एमाले) र ने.क.पा. माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल गर्दै अन्ततोगत्वा एउटै कम्युनिष्ट (वामपन्थी) पार्टी गठन गरी देशमा स्थायित्व र समृद्धिको सगरमाथा पुग्ने सार्वजनिक घोषण गरे ।
Tuesday, 09.12.2017, 11:54am
देश विगारेको पढेलेखेकाले नै हो । इन्द्रचोकमा भारी बोक्नेले देश विगारेको हैन । तर, यो सब नजानेर हैन, जानेर हो । उनीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा हो । उनीहरुमा भएको ज्ञान र क्षमता देशका लागि प्रयोग गर्नुको साटो आफ्नै लागि मात्रै गर्नाले हो । यसो भन्दैमा सबैलाई गलत मान्न सकिन्न भने कम पढेकाले राम्रो कामै गरेका छैनन् भन्न पनि मिल्दैन ।
पहाडी ठूला नदी खोला मात्रै होइन, तालहरुमा माछा मार्न कुशल मछुवारहरुलाई “माझी” भन्ने गरिन्छ पहाडतिर । सायद तराईतिर पनि त्यसै भनिन्छ होला, र त मोरङ झापातिर बस्ने जनजातिलाई “माझी” भन्ने गरिएको । नेपालमा मात्रै होइन, छिमेकी भारत र अन्य मुलुकमा पनि पुस्तैनी पेशा व्यवसायसँग उसको जाति, समाज, समुदायको पहिचान झल्किने गर्छ ।
Wednesday, 09.06.2017, 03:41pm
‘देश त बेथितीको पाराकाष्ठामा पुगिसक्यो’ भन्दै एकजनाले भनेका थिए– “यहाँ पण्डित पुरेत पनि कांग्रेस–एमाले र माओवादी बनेका छन् । केहीले नागपञ्चमीमा जनैपूर्णिमा मनाउन लगाए भने केहीले ग्रहण स्रहणले केही नाप्दैन, पूर्णिमाकै दिन जनैपूर्णे मनाउनपर्छ भने । शास्त्रीय नीति नियमलाई पनि बेथितीका विषय बनाइसके” भनेर ।
Wednesday, 09.06.2017, 03:40pm
के सरकार निष्पक्ष, धाँधली रहित निर्वाचन होला ? गाउन तयार के आफूलाई प्रतिकूल हुने परिणाम आउने देख्यो भनेपनि निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ ?
» अब पद्धति नै फेर्नेतिर सोच्नुपर्ने हो कि
» दुई प्र.म. बीचका दुई “गुफ्तगु भेट” को रहस्य (?)
» स्वास्थ क्षेत्रको लगानीस् नाफा कि सेवा ?
» नयाँ भनेको इतिहासै मेट्नु हो ?
» प्र.म.को भारत भ्रमण कुबेलामा नै हुन लागेको भएपनि सफल होस्
» संघीय¬जातीय उन्माद र दुष्परिणाम
» सीमा युद्ध र संरक्षणको प्रश्न
» विवेकसम्मत परिवर्तन ः आजको खाँचो
» यस्तै नै हो भने- तारा सुवेदी
» प्रयोग र परीक्षणमै जुग जाने भो
» “गोर्खे” मरिरहेछन्, गोर्खाल्याण्ड जलिरहेछ- गोर्खाली “नीरोहरू” ठुमरी खेलिरहेछन्, किन ?
» लोकभय र लोकलाज पचाएका छद्मभेषी लोकतन्त्रवादी
» भरतपुर काण्डले देखाइदियो देश कसरी चलेको छ ?
» राजपाको आन्दोलन र निर्वाचन सार्ने निर्णयले उब्जाएको प्रश्न
» यद्भविष्यवादीको चकचकी
» महाभारतको पुनरावृत्तिको भय
» राजनीति गर्ने व्यवसायी हैन योगी बन्नुपर्छ
» हामी प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हुँदै भाँडतन्त्रतिर लाग्दै त छैनौं
» “द्रुतराजमार्ग” का सन्दर्भ
» निर्वाचन मतगणना ः उपहासको स्थिति
Page 4/21: « 1234567 ... :: »